Họrọ ebe ịchọrọ ibudata faịlụ Google Chrome na Mac | Esi m mac
Họrọ ebe ịchọrọ ibudata faịlụ Google Chrome na Mac
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | Ngwa ndị ọzọ maka Mac, Nkuzi, ọtụtụ
N'etiti ndị ọrụ Mac, enwere uto dị iche iche ma a bịa n'iji ihe nchọgharị. N'ime ha, ụfọdụ na-eji naanị Safari, mana kama, ndị ọzọ na-achọ ịgbanwe ma ọ dịkarịa ala n'etiti ndị nkịtị, dị ka Safari, Chrome, Firefox ma ọ bụ Opera.
Ihe onye ọ bụla n’ime anyị ji ya eme pụrụ iche. Na-agagharị site na forums, anyị na-ahụ onye na-eji otu maka ọrụ na onye ọzọ maka oge ezumike ha, ma ọ bụ onye na-eji ihe nchọgharị kachasị ma na-edebe ndị ọzọ maka oge ụfọdụ ma ọ bụ mmegharị vidiyo nke ihe nchọgharị ha na-adịghị emepụta.
Ya mere, Ọ bụrụ na anyị ejiri otu ihe nchọgharị maka otu ọrụ na nke ọzọ maka nke ọzọ, ọ na-agbanwe agbanwe na faịlụ anyị na-ebudata dị na ebe dị iche iche.. Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgbanwe ọnọdụ ndabara nke Google Chrome, anyị kọwara otu esi eme ya:
Nke mbụ, anyị na-emeghe Google Chrome ma gaa na mmasị. Achọtara ndị a na ogwe ngwaọrụ. Pịa na Chrome ma anyị ga-ahụ Mmasị. Enwere ike nweta otu ihe ahụ site na itinye na adreesị mmanya: chrome: // ntọala /
Mmasị Chrome agaghị apụta dị ka menu mmapụta ma ọ bụ windo ọhụrụ. Kama nke ahụ, taabụ ọhụrụ akpọrọ Ntọala ga-emeghe, yana ndọtị na ntọala.
Anyị na-aga na ngalaba Ntọala, na ala, anyị ga-ahụ nhọrọ ahụ «Gosi nhọrọ dị elu»
Anyị ga-aga na ngalaba Nbudata. N'ebe a, anyị nwere ike ime ihe abụọ: Gbanwee ebe ị ga-ebudata na ndabara ma ọ bụ jụọ usoro iji jụọ anyị oge ọ bụla ebe anyị chọrọ ibudata. Na nhọrọ mbụ, anyị ga-pịa mgbanwe, anyị ga-elekwa anya na menu nke mechiri oghere ahụ ebe faịlụ ga-echekwa. Kama, pịa na "Jụọ ebe faịlụ ọ bụla ga-echekwa tupu ibudata ya" Odabara mgbe anyị na-ebudata ọtụtụ faịlụ ma debe ha ozugbo na folda ebe kachasị kwesịrị ekwesị maka mkpa anyị.
Ozugbo ịmechara, achọla bọtịnụ nchekwa, n'ihi na dị ka ọrụ igwe ojii ikpeazụ, ọ dịghị adị, ya bụ, anyị nwere ike imechi taabụ ma ntọala ga-echekwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Họrọ ebe ịchọrọ ibudata faịlụ Google Chrome na Mac
15 Apple TV egwuregwu na ị na-ekwesịghị ịkwụsị
Ọkwa ọhụụ nke Apple Watch Series 2